“သံဃာ့ဂုဏ်ရည် -၂” အပိုင်း (၁)
“သံဃာ့ဂုဏ်ရည် -၂” အပိုင်း (၂)
“မုန်းရတဲ့ (၁၀)ချက် နှင့် နှစ်သက်မိတဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်။”
အပြု၊ အဖျက်ဤနှစ်ရပ်ကို ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပါလော...
ကမ္ဘာကြီးပျက်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကြားသိကြရတော့ အနည်းနဲ့ အများတော့ တုန်လှုပ်ကြတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တခါတည်း ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် ဝေဖန်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းနေထိုင် နေတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပါ။ ဒီအကြောင်းတွေက အဓိက မကျပေမဲ့ လူအများစုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတော့ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် ကျနော်တို့ သေတော့မှာလို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။ သေခြင်းတရားကို ပုထုဇဉ် လူသားတိုင်း ကြောက်ကြတာအမှန်ပါ။ အမှန်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ သံသရာခရီးမှာ အကြိမ်ကြိမ် သေခဲ့ရပါတယ်။ သေနည်းမျိုးစုံနဲ့ သေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာ ဘ၀ပေါင်း မရေတွက်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဒါတွေက ခန္ဓာရလာလို့ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေပါ။ ကျနော်တို့ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမှာက ထို ဒုက္ခအပေါင်းက လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ နိရောဓ သစ္စာကို ဆိုက်ရောက်အောင် ကြိုးစားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဓိက နဲ့ သာမည ကို ပိုင်းခြားသိရပါမယ်။ မိမိရဲ့နေ့စဉ် ဘ၀မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တွေသာ လုပ်ဆောင်ဖို့၊ မမေ့မလျော့ဖို့၊ အဓိက ကျပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်မှာ မပျက်တာက မသေချာဘူး။ မိမိ ခန္ဓာ ပျက်ရမှာတော့ သေချာပါတယ်။
“သဗ္ဗေသင်္ခါရာ အနိစ္စာ” လို့ဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသော ဖြစ်ဖြစ်သမျှ အရာဝတ္ထုတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘော ရှိကြပါတယ်။ သတ္တ၀ါတွေနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးလဲ တနေ့ကျရင်တော့ ပျက်စီးရမှာပါ။ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး နှစ် တစ်သိန်းအလိုမှာ နတ်တွေက “ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မည်” လို့ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ နတ်တွေ ကြွေးကြော်သံကြားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေက အရင်ကလို မမေ့မလျော့ကြပဲ ကုသိုလ်တရားတွေ ပွားများအားထုတ် တာကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ခါနီးမှာ အားလုံးက ဗြဟ္မာ့ဘုံရောက်ဖို့ ဈာန်တရားတွေ ရရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ အကြောင်းမှာ မီး၊ ရေ၊ လေ စသဖြင့် ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ မီးကြောင့်ပျက်ရမဲ့ ကမ္ဘာမှာ ပျက်ချိန်တန်ရင် နေ ၂ စင်း ပေါ်လာပါမယ်။ နေ အသစ်က ည အခါမှာ ဆက်လက် တက်လာသဖြင့် အဲဒီအချိန်မှာ နေ့ အခါ၊ ညအခါ လို့မရှိတော့ပါဘူး။ ထို့နောက် ၃ စင်းမြောက် နေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ မြစ်ကြီးတွေမှာ ရှိတဲ့ ရေတွေ ခမ်းခြောက်မယ်။ ၄ စင်းမြောက် နေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဟိမ၀န္တာတော အတွင်းမှာရှိတဲ့ အိုင်ကြီး ၇ အိုင်လဲ ခြောက်ခမ်းရမယ်။ ၅ စင်းမြောက် နေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သမုဒ္ဒရာရေတွေ ခြောက်ခမ်းမယ်။ ၆ စင်းမြောက် နေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကမ္ဘာလောကမှာ အစိုအစေး ဓာတ်တွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ ၇ စင်းမြောက် နေထွက် လာတဲ့ အချိန်မှာ ကမ္ဘာလောကမျိုး တစ်သိန်းမျှ မီးဟုန်းဟုန်းထတောက်ပါမယ်။ ကာလအတန်ကြာ တောက်လောင်တဲ့ မီးဟာ ပထမဈာန် ဗြဟ္မာ့ဘုံအထိ တောက်လောင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် နတ်ပြည် ၆ ထပ်လဲ မီးလောင် ပျက်ဆီးရပါတယ်။ မီးလောင်စရာ မရှိတဲ့ ပြာမှုန့် အထိ မကျန်တော့မှ ကမ္ဘာပျက်ခြင်း ပြီးပါတယ်။ (ရေဖျက်၊ လေဖျက်ဖို့ အလှည့်မှာလဲ ဆားငန်ရေထိပြီး ဆွေးမြည့်ကြေရပုံ၊ လေမုန်တိုင်းကျ၍ ကြေမွကြရပုံ တို့ကို သိကြပါ)။ ထိုသို့ ကမ္ဘာပျက်နေတဲ့ အချိန်ဟာ အန္တရကပ် ၆၄ ကပ် ကြာပါတယ်။ (၁၀နှစ်တမ်းမှ တဖြည်းဖြည်း တက်၍ အသက် အသင်္ချေတမ်းသို့ရောက်၊ ထို အသင်္ချေတမ်းမှ ၁၀နှစ်တမ်းသို့ရောက်၊ ထိုသို့ တက်ကပ်၊ ဆုတ်ကပ် တစ်စုံကို အန္တရကပ် လို့ခေါ်ပါတယ်)။
ကမ္ဘာပျက်မှာသည် နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ လိုပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် အရိမေတ္တယျ ဘုရားရှင် ပွင့်ပြီးမှ ကမ္ဘာလောက ပျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ပါမယ်။ အရိမေတ္တယျဘုရားရှင် ပွင့်ဖို့သည် အချိန်ကာလများစွာ လိုပါသေးတယ်။ ယခုပြောနေကြသော ကမ္ဘာပျက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာကြီး ဆိတ်သုန်းလောက်အောင် ပျက်ဆီးခြင်းမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အနည်းငယ်ပျက်စီးချင် ပျက်စီးပါလိမ့်မယ်။ ပျက်စီးချင်မှလဲ ပျက်စီးမယ်။ ဒီအကြောင်းတွေပြောပြီး ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ၊ ကယ်တင်ရှင်ဝါဒတွေက သူတို့တွေရဲ့ ဘုရားက ကယ်နိုင်မယ်ဆိုပြီး သိမ်းသွင်းတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အရင်ကလဲ ဒီလို ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နေရာ အသီးသီးမှာ စစ်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ငလျင်လှုပ်တာတွေ၊ မုန်တိုင်းတိုက်တာတွေ၊ ဆူပူသောင်းကျန်း နေတာတွေသည်လဲ ပျက်ဆီးခြင်းတွေပါပဲ။
မည်သို့ပင် ဆိုကြပါစေ… ကျနော်တို့တွေက အချိန်တိုင်း သေခြင်းတရားကို ဆင်ခြင်ပြီး မိမိမှာ ကောင်းမှုတွေ လုပ်နေရမယ် ဆိုတာ သိပြီးသားပါပဲ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာ မေ့လျော့နေတဲ့သူကို သေနေတဲ့ သူလို့ ခေါ်ဆိုထိုက်ပါတယ်။ “ကုသိုလ်မယူ အသက်ရှူ၊ ထိုသူ သေလို့နေတော့သည်၊ ကုသိုလ်လဲယူ အသက်ရှူ ထိုသူမသေ၊ ရှင်တော့သည်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုသိုလ်ဆိုတာ တကူးတက လုပ်ယူနေရတာမျိုးမှ ဆိုနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့နေ့စဉ် သွားလာနေထိုင်နေတဲ့ အပေါ်မှာ သတိလေးရှိပြီး လုပ်ဆောင်နေမယ်၊ မိမိ စိတ်အစဉ်ရဲ့ ဖြစ်မှု၊ ပျက်မှု သဘောတရားလေးတွေကို သိပေးနေမယ်၊ မိမိခန္ဓာကပြတဲ့ ဖောက်ပြန်မှု သဘောလေးတွေကို ပေါ်လာတိုင်း အပျက်သဘောပဲ ရှိပါလား ဆိုတာ သိပေးနေရင် မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး နေနည်းဖြစ်ပါ တယ်။ သာသနာတွင်း ကာလမှသာ ဒီသဘောတရားတွေကို သိခွင့်ရကြရတာပါ။ ယခုအချိန်လို သာသနာနဲ့ ကြုံနေစဉ်၊ မိမိတို့မှာ အားထုတ်နိုင်တဲ့ ခန္ဓာနဲ့ တရားတွေကို သိနိုင်တဲ့ ဉာဏ်ပညာရှိနေလျက်နဲ့ မကျင့်ကြံကြ ရင်တော့ အကြိမ်ကြိမ် သေကြရဦးမယ် မှတ်ပါ။ ကမ္ဘာလောက ပျက်မယ်ဆိုတာကြားတာနဲ့ ငါကြားလိုက်တဲ့ ကြားသိစိတ်လေးက ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားပါလား ဆိုတဲ့ အသိလေးရအောင် ကျင့်လိုက်ကြပါ။
တဆက်တည်းပြောလိုသည်မှာ ဒီကမ္ဘာပျက်ပြီးလို့ နောက် ဖြစ်လာမဲ့ ကမ္ဘာသည် သုညကမ္ဘာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုညကမ္ဘာဆိုတာ ဘုရားမပွင့်တဲ့ ကမ္ဘာပါ။ နောက်ဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်ကို မမှီလိုက်ရင်တော့ တရားနဲ့က ပိုပြီး ဝေးရဦးမှာပါပဲ။ ထို့အတူ အကြိမ်ကြိမ် သေရဦးမှာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ အားထုတ်ကျင့်ကြံမှသာ ယခုဘ၀မှာ တရားမရခဲ့ရင်တောင် နောက်ဘုရားသာသနာနဲ့ တွေ့ရဖို့ အတွက် ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်။ ယခုလဲ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွေနဲ့သာ မွေ့လျော်ကြရင်တော့ မသေချာလှပါဘူး။
“ကျန်ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ အဓိကနှင့် သာမည ခွဲခြားသိရှိပြီး မိမိ ရုပ်၊ နာမ်တွေရဲ့ ဖြစ်ပျက် အစဉ်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့၊ သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။”
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 27.12.08 17 ရေးသားခဲ့ရန်
သံဃာ့ဂုဏ်ရည် အပိုင်း(၂) တရားတော်ကို ဆက်လက်နာယူကြပါ။ နာတဲ့ အတိုင်းလဲ သိကြပါစေ။ သိတဲ့ အတိုင်းလဲ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 22.12.080ရေးသားခဲ့ရန်
သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များသည် ထေရ၀ါဒ သာသနာတော်ကို တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့အချိန် ကျနော်တို့တွေသည် စစ်မှန်သော တရားနည်းလမ်းတွေ လေ့လာသိရှိခွင့်၊ နာကြားခွင့်၊ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ခွင့် ရရှိနေခြင်းမှာ သံဃာတော်များ၏ ကျေးဇူးကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘေးဒုက္ခအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ရာ တရားနည်းလမ်းများကို လမ်းညွှန်ဟောကြား ဆုံးမတော်မူခဲ့သလို၊ လောကအတွင်း နေထိုင်နည်း၊ စီးပွားရှာနည်း၊ လူသားတို့ တိုးတတ်နည်း စတဲ့ လောကကြီး အေးချမ်းသာယာစေမည့် တရားနည်းလမ်းများကိုလဲ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထိုတရားတော်များကို သံဃာတော်များကပင် ပြန်လည်ဟောကြား ဆုံးမတော်မူကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ ဟောကြားတော်မူသော “သံဃာဂုဏ်ရည် တရားတော်” ကို အားလုံးနာကြားသိရှိ လိုက်နာစေချင်ပါတယ်။
ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ ဟောကြားသောတရားများကို အောက်ပါလင့်မှာ ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 16.12.083ရေးသားခဲ့ရန်
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 15.12.080ရေးသားခဲ့ရန်
မကြာခင်က ဘလော့တခုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆူပူမှုတွေ အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်မိပါတယ်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာလဲ စစ်တွေဖြစ်လိုက်၊ ဆူပူမှုတွေဖြစ်လိုက်နဲ့ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ခံစားခွင့်ရတာ နည်းပါးကြပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြလဲ? လူတွေအသီးသီး မငြိမ်းချမ်းရခြင်းဟာ လူတိုင်းခေတ်ပညာ မတတ်လို့၊ စာ၊ ၀တ်၊ နေရေး မဖူလုံလို့၊ မချမ်းသာကြလို့ ဟုပြောဆိုကြသည်မှာ တစိတ်တဒေသ အားဖြင့် မှန်ပါတယ်။ လုံးဝ မှန်ကန်တယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါ။ စားဝတ်၊ နေရေးပြည့်စုံနေတဲ့ သူတွေသည်လဲ ငြိမ်းချမ်းမှုကို မရနိုင်ကြသေးပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပူလောင်နေကြတာပါပဲ။ သိပ္ပံပညာ တိုးတတ်မှုတွေသည်လဲ သွားလာ၊ ဆက်သွယ်ရာမှာ လွယ်ကူစေတဲ့ အထောက်အပံ့တော့ ဖြစ်စေပါတယ်။ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းမှု အစစ်မှန်ကိုတော့ ပေးဆပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
ထိုမငြိမ်းချမ်းရခြင်း၏ အရင်းအမြစ်ကတော့ “ကိလေသာ” ထူထပ်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ကိလေသာ ထူတဲ့သူတွေကိုပဲ “ပုထုဇဉ်” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကျယ်အားဖြင့် ကိလေသာ ၁၅၀၀ ရှိပါတယ်။ (အချစ် ၁၅၀၀ ဆိုသည်မှာ ကိလေသာ ၁၅၀၀ ကိုပြောခြင်းပါ)။ အကျဉ်းအားဖြင့်တော့ ၁၀ပါး ရှိပါတယ်။
(၁) လောဘ = လိုချင်တပ်မက်ခြင်း။
(၂) ဒေါသ = အမျက်ထွက်ခြင်း။
(၃) မောဟ = မိုက်မဲတွေဝေခြင်း၊ မသိခြင်း။
(၄) မာန = ထောင်လွှား၊ မော်ကြွားခြင်း။
(၅) ဒိဋ္ဌိ = အယူလွဲမှားခြင်း။
(၆) ၀ိစိကိစ္ဆာ = ယုံမှားခြင်း၊ သံသယဖြစ်ခြင်း၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း။
(၇) ထိန = ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း။
(၈) ဥဒ္ဓစ္စ = စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်း၊ စိတ်မငြိမ်သက်ခြင်း။
(၉) အ ဟီရိက = အကုသိုလ်ပြုရန် မရှက်ခြင်း။
(၁၀) အ နောတ္တပ္ပ = အကုသိုလ်ပြုရန် မကြောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပုထုဇဉ် ဆိုရင် လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗြဟ္မာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြေလျှိုး မိုးပျံနိုင်တဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ် ယခု ပြောခဲ့တဲ့ ကိလေသာ ၁၀ပါး ရှိနေပါတယ်။
ကိလေသာကို အမျိုးအစားအားဖြင့်လည်း ခွဲလို့ရပါသေးတယ်။
(၁) ၀ီတိက္ကမ ကိလေသာ - အကြမ်းစားကိလေသာ။ အာရုံ (၅)ပါး ကို နှစ်သက်တွယ်တာ၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ တို့ဖြင့် လောဘ၊ ဒေါသ အလျောက် ဖောက်ပြန်ကျူးလွန်စေတတ်မှု။ (သီလ စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် တားဆီရန်)။
(၂) ပရိယုဌာန ကိလေသာ - အလတ်စားကိလေသာ။ မနောဒွါရ၌ ထကြွသောင်းကျန်းတတ်သည့် ကိလေသာ။ (သမထ ဘာဝနာကျင့်ကြံ ခြင်းဖြင့် တားဆီးရန်)။
(၃) အနုသယ ကိလေသာ - အနုစားကိလေသာ။ သံသရာတလျှောက် အစဉ်ကိန်းအောင်းနေခဲ့ပြီး အခါအခွင့် သင့်သောအခါ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဖောက်ပြန်ကျုးလွန်တတ်သော ကိလေသာ။ (၀ိပဿနာ ဘာဝနာအားထုတ် ခြင်းဖြင့် အမြစ်ဖြုတ် ပယ်သတ်ရန်)။
“မနောဒွါရ” မှ အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာ ထကြွသောင်းကျန်း လှုပ်ရှားကြတဲ့ “၀စီဒုစရိုက်” တွေ၊ “ကာယဒွါရ” မှ အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာ လှုပ်ရှားထကြွ သောင်းကျန်းကြတဲ့ “ကာယဒုစရိုက်” တွေကို “၀ီတိက္ကမ ကိလေသာ” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီကိလေသာတွေ ထကြွခြင်းကို မျက်မြင်အားဖြင့် လူတိုင်းပဲ သိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အင်္ဂါ၊ နှုတ်အင်္ဂါ လှုပ်ရှားထကြွခြင်း၊ သောင်းကျန်းခြင်း မရှိသေးပဲ စိတ်မှာသာ ထကြွနေတဲ့ “ဒေါသ” စတဲ့ တရားတွေကို “ပရိယုဌာန ကိလေသာ” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီကိလေသာမျိုး ထကြွခြင်းကိုတော့ အဘိညာဉ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ သိနိုင်ကြပါတယ်။
မနောဒွါရမှာပင် ထကြွခြင်းမရှိသေးပဲ၊ စိတ်သန္တာန်မှာ အမြဲကိန်းနေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ စတဲ့တရားတွေကို “အနုသယ ကိလေသာ” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီကိလေသာမျိုးကိုတော့ မြတ်စွာဘုရားမှတပါး ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်၊ မသိနိုင်ကြပါ။
၀ီတိက္ကမ ကိလေသာ နဲ့ ပရိယုဌာန ကိလေသာကို သာသနာပ ကာလမှာလဲ ပယ်သတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အနုသယ ကိလေသာ ပယ်သတ်နည်းကိုတော့ ဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူမှာသာ သိကြရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်နှင့် ကြုံပါသော်လဲ၊ “မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်”၊ “မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်”၊ “မထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်” တွေက တော့၊ သိရှိလိုက် ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း မပြုကြပါ။
ကိလေသာ ၁၀ပါး တိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ “ဒိဋ္ဌိ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲ “အတ္တဒိဋ္ဌိ” (ငါစွဲ) ကိုဆိုလိုပါတယ်။ သူရဲ့နောက်မှာတော့ “တဏှာ” နဲ့ “မာန” က ကပ်ပြီးပါလာပါတယ်။ ထိုသုံးခု ပေါင်းလိုက် ပြီးတော့ “ပပဉ္စတရား ၃ပါး” (သံသရာနယ်ချဲ့တရား) လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ “အတ္တဒိဋ္ဌိ” (သို့မဟုတ်) “သက္ကာယဒိဋ္ဌိ” ခေါင်းဆောင်ကြီးကို မနှိမ်နင်းနိုင်လို့ သူရဲ့တွဲဘက်၊ ရဲဘော်ဖြစ်ကြတဲ့ “တဏှာ”၊ “မာန” တို့ ထကြွသောင်းကျန်းတာကို ခံနေကြရပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးမရခြင်းရဲ့ အမြစ်ဟာ ထို ဒိဋ္ဌိကြီး ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းစွာသိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သံသရာတလျောက်လုံးမှာလဲ ထို “အတ္တဒိဋ္ဌိ” ခေါင်းဆောင်တဲ့ “ပပဉ္စအဖွဲ့ကြီး”က အောက်အ၀ီစိ တိုင်အောင် နယ်ချဲ့တတ်ပါတယ်။ ၃၁ ဘုံက မလွတ်သ၍ ဘယ်ပုထုဇဉ်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရနိုင်ကြပါ။ အို၊ နာ၊ သေ၊ မွဲ၊ ကွဲ ဆိုတဲ့ ဘေးကြီးတွေနဲ့ ပြေးမလွတ်နိုင်အောင် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရမှာပါပဲ။ (ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ တရားတွေကို ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ထိုးထွင်းသိမြင်ထားမှသာ စိတ်ချရပါမယ်)။ “မွဲ၊ ကွဲ” ဆိုတာကတော့ ဘယ်လောက်ချမ်းသာတဲ့ သူပဲဖြစ်ပစေ သေတဲ့အခါကျရင် ပိုင်ဆိုင်သမျှထားခဲ့ရတာပါ။ လုံချည်တစ်ထည်၊ အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့သာ သွားရှာရပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ထက် “မွဲ” တဲ့သူမရှိတော့ပါ။ မိမိချစ်ခင် မြတ်နိုးတဲ့ သား၊ မယား၊ ဆွေမျိုး တွေနဲ့လဲ ခွဲခွာသွားရ တဲ့အတွက် “ကွဲ” တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သေခြင်းတရားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ ငါ့ကိုယ်၊ ငါ့ဟာ ဆိုတာ တွေဟာ ဘာမှ သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့သန္တာန်မှာ သစ္စာတရားတွေကို ထိုးထွင်းသိမြင်ထားပါမှ စိတ်ချရပါမယ်။ ယခုအချိန်မှာ လူသားအားလုံး ကိလေသာတွေ နည်းအောင်ကျင့်ကြံ ကြမှသာ လောကလဲ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာ ကိလေသာတွေ ထူပိန်းနေသ၍ လောကကြီး မငြိမ်းချမ်း နိုင်ပါဘူး။ ထို့အတူပဲ မိမိကိုယ်ကိုနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးငြိမ်းမှု အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အနည်းဆုံး ဒိဋ္ဌိကိလေသာနှင့် ၀ိစိကိစ္ဆာကိလေသာ နှစ်ပါးကို ပယ်သတ်ခြင်း မပြုနိုင်သမျှ ဘယ်တော့မှာ ငြိမ်းချမ်းမှု မရနိုင်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် ကိလေသာတွေ နည်းပါးအောင် သီလစောင့်ထိန်းမှု၊ သမထဘာဝနာ ကျင့်ကြံမှု၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ အားထုတ်မှုတို့ဖြင့် မွေ့လျော်ရပါမယ်။ သို့မှ မိမိတို့ လောကကြီး ငြိမ်းချမ်းနိုင်သလို၊ မိမိရဲ့ စိတ်သန္တာန် မှာလဲ ကြည်လင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 13.12.085ရေးသားခဲ့ရန်
အကိုပုလုကွေးက Tag ထားတာကြာပြီ။ ကျနော်အခုရက်ပိုင်း မအားတာနဲ့ ရေးတာ နောက်ကျသွားတယ်။ နောက်ကျတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် အကို။ ကိုယ့်ကို မုန်းတဲ့ အချက်တွေဆိုတော့…
(၁) ဘုရားတွေမှာနေရှိတဲ့ နတ်စင်တွေ၊ စောင်းတန်းက ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ ခန်းတွေကို ရွေ့ပြောင်းချင်တာ။
(၂) စိတ်မြန်တတ်တာ။ (တခုခု အလိုမကျရင် ချက်ချင်းပြောတတ်တဲ့ အကျင့်)
(၃) မနက်အစောကြီး မထချင်တာ။ (နိုးရင်လဲ ပြန်အိပ်လိုက်ချင်တာ)
(၄) ဟင်းချက်ပျင်းတာ။ (ဖြစ်သလိုစားတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ ချက်ပြီဆိုရင်လဲ ကောင်းကောင်း ချက်တတ်တယ်၊)
(၅) ဖတ်မှတ် လေ့လာ သလောက် မမှတ်မိတာ။ (လိုအပ်လို့ ကျက်ထားလဲ ရုတ်တရက် မေ့နေတတ်တာ)
(၆) စကားများများ ပြောလာရင် လက်ပါတတ်တာ၊ (အရင်က စကားများလာပြီဆိုရင် လက်ကအရင် ရောက်သွားတတ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သည်းခံတတ်လာပါတယ်)
(၇) မလိုပဲ စကားအများကြီးပြောနေတာကို မကြိုက်တတ်တာ။
(၈) စိတ်ခံစားမှု လွယ်တတ်တာ။ (ချို့တဲ့တာတွေ့ရင် အရမ်းသနားတတ်တယ်)
(၉) ကိုယ်သိသလောက် မလုပ်နိုင်သေးတာ။ (ဒီအချက်ကတော့ အင်မတန် ဆိုးတယ်။ တော်တော်ကြိုးစား ရမယ်)
(၁၀) ဘလော့တွေ ဖတ်တိုင်း စီဘောက်မှာ စာမရေးတတ်တာ။ (ဘာရေးရမှန်း မသိတာလဲ ပါပါတယ်)။
ကျနော့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ စဉ်းစားပြီးရေးလိုက်တာပါ။ ခင်မင်လို့ Tag လိုက်တဲ့ မွေးနေ့တူ အကိုပုလုကွေး ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မကြာခင်လေးကပဲ အစ်မမက်မက်က Tag လိုက်ပါပြီတဲ့။ ကဗျာဆိုတော့ နဲနဲတော့ အမောသက်သာသွားတယ်။ ကျနော် ၈ တန်း ကတည်းက လက်ရေးနဲ့ရေးပြီး သိမ်းထားတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အခုလဲ အဲဒီ လက်ရေးလေးနဲ့ သိမ်းထားတာရှိပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ပေါ်လွင်စေလို့ပါ။ ကဗျာလေးရေးဖြစ် အောင် Tag တဲ့ အစ်မမက်မက်ကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။
“သား၊ သမီးတို့ရဲ့ အမေ”
စွမ်းအား အမေ စိုက်၊
သည်လွန်ပွဲမှ “အူဝဲ” သံသာ၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 8.12.089ရေးသားခဲ့ရန်
သာသနာထွန်းကားရာ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ပါးသော ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ သူ့ကျွန်ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရပြီး နှစ်(၁၀၀)၀န်းကျင် သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းခဲ့မှုအပေါ် အကြောင်းခံပြီး သာသနာနှစ် (၂၄၉၈)တွင် သင်္ဂါယနာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မေးခွန်းများကို မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက ဖြေဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဆဋ္ဌမအကြိမ် သင်္ဂါယနာတင်ပြီးမှ ပိဋကတ်တော်များကို စာအုပ်များတွင် ရိုက်နှိပ်ပြီး သာသနာတော် ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားရှင်၏ ဘုရားလောင်း ဘ၀မှ ကျေးဇူးတော်၊ ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် သာသနာထူထောင်ပြီး သာသနာပြုပေးခဲ့သော ကျေးဇူးတော်၊ ဘုရားရှင်၏ သာဝကများ၊ သားတော်များဖြစ်သော၊ ခေတ်အဆက်ဆက် သာသနာပြုလာခဲ့သော သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ၏ ကျေးဇူးတော်တို့ကို ကျနော်တို့တွေ မမေ့အပ်ပါဘူး။ ထို့အတွက်ကြောင့် မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ၏ ဖြစ်တော်စဉ် ထေရုပ္ပတ္တိ အနှစ်ချုပ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ရောက်လာကြတဲ့ မောင်နှမများအားလုံး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတော်တို့၏ ကျေးဇူးတရားများကို ပိုမိုသိရှိကာ တရားတော်များကို လိုက်နာကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 5.12.085ရေးသားခဲ့ရန်
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ သာမန်အားဖြင့် သဒ္ဓါတရား(ယုံကြည်မှု့) ကောင်းကြပါတယ်။ ဘာသာဝါဒတိုင်းဟာ ယုံကြည်မှု (မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်မှု)ကို အခြေခံကြပါတယ်။ အခြားဘာ သာဝင်တွေ နားလည်ကြတဲ့ သက်ဝင်မှု၊ ယုံကြည်မှုများက ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် ပတ်သတ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒမှာ သဒ္ဓါတရားဆိုတာ ယုံကြည်မှု သက်သက်မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင် ကျေကျေနပ်နပ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနားလည်ပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ချယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုယုံ ကြည်မှုက ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ ဖြစ်တည်မှသာ သံသရာဝဲဂယက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်မှာပါ။
ထို့ကြောင့်ပင် သဒ္ဓါယ တရတိ သြဃံ (အခက်အခဲမှန်သမျှကို ယုံကြည်ချက်ဖြင့် လွန်မြောက်၏) ဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မိန့်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြီးပြည့်စုံ၍ မိမိတို့အမှန်တကယ် မဂ်ဖိုလ် ရဖို့ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရာမှာ ဆရာရွေးမှန်ကန်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ယခုအခါမှာ အခြားသော အတုအယောင်များစွာက နေရာယူလာကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပင် စတုတ္တအကြိမ် နိုင်ငံတော်ဗဟို သံဃာ့ဝန်ဆောင်အဖွဲ့ သဒ္ဓမ္မအစည်းအဝေးမှာ သဘာပတိ ဥက္ကဋ္ဌ အဘိဓဇမဟာ ရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိက မြင်းခြံမြို့ ကိုးဆောင်တိုက် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသောဘိတ မှ အောက်ပါအစည်းအဝေးဖွင့် သြ၀ါဒကထာကို မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဆရာတော်ဘုရားများ အထူးသတိပေးလျောက်ထားလိုသော အချက်မှာ ယခုအခါ တပည့်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နတ်၊ မှော်၊ ၀ိဇ္ဇာ၊ ဂါထာ၊ မန္တယား စသော တန္တရ၊ မန္တရ ၀ါဒများ ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းအောင် တိုးပွားနေသည်ကို ဆရာတော်ဘုရားများ သတိပြုစေချင်ပါ သည် ဘုရား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ အများစုဟာ ထေရ၀ါဒသာသနာ စစ်စစ်ကို နှစ်နှစ်ကာကာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနည်းပါးပြီး ထိုတန္တရ၊ မန္တရ၀ါဒများဘက်သို့သာ လိုက်ပါနေကြပါသည်။ ဤအချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အချို့ရဟန်းများသည် ဂန္ထဓူရ (စာပေသင်ခြင်း)၊ ၀ိပဿနာဓူရ (တရားအားထုတ်ခြင်း) ဟူသော ရဟန်းတော်တို့၏ တာဝန်ကို ပစ်ပယ်၍ တန္တရ၊ မန္တရအလုပ်ကို ရဟန်းတော်တို့ တာဝန်အလား ကြိုးစားအားထုတ် ပြုလုပ်နေကြသည်မှာ သာသနာတော်အတွက် ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းသော ဘေးရန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဘုရား...”။ ဤအချက်တွေကို နာယူခြင်းဖြင့် ထေရ၀ါဒသာသနာအပေါ် အရောင်ဆိုးသော အရာများကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ လူတွေသည်လည်း နေ၊ ထိုင်၊ ပြောဆိုတက်ဖို့လိုပါတယ်။ အချို့သော လူများက ဘုရားကြီးကျောင်းရောက်ရင် မဂ်ဖိုလ်ရောက်ကြောင်းတရား၊ ဒါန၊ သီလစတဲ့ တရားအကြောင်းများကို မေးမြန်းခြင်းမရှိပဲ၊ ဘာဂဏန်းကောင်းလဲ၊ ဘာထိုးရမလဲ စတဲ့ ၂လုံး၊ ၃ လုံးဂဏန်းများတောင်းဖို့သာ စဉ်းစားကြပါတယ်။ ဤနေရာ ကိုယ်တွေ့လေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော့် ဂျီတော့မှာ တင်ထားတဲ့ ကိုရင်ပုံလေးကိုတွေ့တော့...“ဦးဇင်းလေးလား၊ တပည့်တော်ကို ၂လုံးဂဏန်းပေးပါတဲ့..”။ ဒါနဲ့ သံဃာကို အလေးအမြတ်ပြုတတ်ဖို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အဓိက ဆိုလိုချင်တာက လူတွေကိုကလည်း ရတနာမြတ်သုံးပါး အပေါ်မှာ အလေးအမြတ် ပြုတက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လောကီကောင်းကျိုးတစ်ခုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ အခြားသော အတုအယောင် များအပေါ် အားထားချင်ကြတော့ လိမ်တဲ့သူက ပိုပြီးကြိုက်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ အိမ်နားမှာ ဘိုးတော်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ သာသနာပွဲထိုးတာက ကန်တော့ပွဲမှာ ၀လုံးတွေ ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ ၀လုံးဘိုးတော်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ (အမှန်တော့ ဘုရားရှေ့မှာ အုန်းစိမ်း၊ ငှက်ပျောစိမ်းတွေနဲ့ ကန်တော့ပွဲလုပ်တာ မသင့်တော်ပါ။ သာသနာပွဲဆိုတာ မိသားစုတွေလိုက် ကိုယ့်အိမ်မှာ တရားဆွေးနွေး၊ တရားနာ၊ ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တဲ့ ပွဲလေးလို့ နားလည်ပါတယ်)။ တနေ့တော့ ကျနော်လည်း ဦလေးနဲ့ ဘိုးတော်ဆီကိုသွားပြီး ၀လုံးပေါ်တယ် ဆိုတာသွားကြည့်တယ်။ ကျနော့် အမြင်တော့ ဘာမှကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ သူ့အိမ်မှာလည်း ကန်တော့ပွဲတွေရှုပ်နေတာပါပဲ။ နောက်တော့ အဲဒီဘိုးတော်က ၂လုံး၊ ၃လုံးတွေ ပေးတာမှန်တယ်ဆိုပြီး အတော်များများ ကိုးကွယ် လာကြပါတယ်။ ဘိုးတော်က နတ်ပွဲလည်း ပေးပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း နတ်ဝင်ကတယ်။ လူတွေလာရင် ငါ့သမီးကြီး၊ ငါ့သားကြီးဆိုပြီး ဓာတ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်း လုပ်ပါသေးတယ်။ လူတွေကလည်း အဲလိုဆိုရင် အတော်ကိုသဘော ကျတာပါ။ နောက်တော့သူ့ကို ယုံစားကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေ စီးပွားပျက်တာပါပဲ။ သူလည်း အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ၊ သာမန်လူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ အတုအယောင်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကြာရှည်မခံပါဘူး။ သတိဉာဏ်ယှဉ်ပြီးမှ ယုံကြည်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဓမ္မစေတီဆရာ တော်ဘုရား၏ “နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည်” တရားမှ ယခုလို မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။
၁. သရဏဂုံတည်စေသောဆရာ = ဆရာကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း (Good Teachers)။
၂. သစ္စာ ၄-ပါး သိစေတဲ့ဆရာ = ဆရာမှန်၊ မိတ်ဆွေမှန် (Right Teachers)။
၃. အာသဝေါတရား ၄-ပါး ကုန်စေတဲ့ဆရာ = ဆရာမြတ်၊ မိတ်ဆွေမြတ် (Nobel Teachers)။
“ကုန်ရှုံးတော့ တစ်ခေါက်”၊ “လင်ကုန်ရှုံးတော့ တစ်သက်လုံး မှောက်”၊ “ဆရာကုန်ရှုံးတော့ တစ်သံသရာလုံးမှောက်..” ဟူသောစကားအတိုင်း ဘာသာရေးမှာ ဆရာရွေးမှားရင် ယခုပစ္စုပ္ပန်၊ သံသရာနှစ်ဖြာလုံး ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ ဆရာရွေးမှန်ရင်လည်း မိမိကောင်းကျိုးအားလုံး ပြီးစီးတတ်ကြောင်းကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက အရှင်အာနန္ဒာကို မိန့်ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ မိမိတို့မဂ်ဖိုလ်ရဖို့ အတွက် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သင့်သော ဆရာကောင်းများ၏ အင်္ဂါလက္ခဏများကို သတ္တတ အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော်တွင် ဘုရားရှင်က ဟောကြားထားပါတယ်။ ထိုအချက်တွေကို နှောင်းလူများ အလွယ်တကူ မှတ်မိစေရန် မန်လည်ဆရာတော်က မဃဒေ၀လင်္ကာသစ်တွင် ယခုလိုဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါ တယ်။
“ ရိုသေချစ်ထိုက်၊ ချီးမွမ်းထိုက်နှင့်၊
၁။ ရိုသေထိုက်သော ဂုဏ်လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊
၂။ ချစ်ခင်ထိုက်သော ဂုဏ်လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊
၃။ ချီးမွမ်းထိုက်သော ဂုဏ်လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊
၄။ မိမိ၏လွဲမှားမှု၊ မိုက်မဲမှုကို ဆုံးမခြင်း၊
၅။ မိမိမေးသမျှကို ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း၊
၆။ နက်နဲသော ဓာတ်၊ ပရမတ်၊ သစ္စာတရားများကို ဟောကြားနိုင်ခြင်း၊
၇။ အကျိုးနည်းသော အလုပ်များကို တားမြစ်၍ အကျိုးရှိသော အလုပ်များကို ညွှန်ပြနိုင်ခြင်း၊
ဤနေရာမှာ.. ရိုသေထိုက်၊ ချစ်ခင်ထိုက်၊ ချီးမွမ်းထိုက်သော ဂုဏ်လေးပါးမှာ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချက်တွေကတော့...
၁။ ဒါန = လောဘမကြီးဘဲ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲသူ ဖြစ်ရမယ်။
၂။ ပိယ၀ါစာ = ဒေါသမကြီးဘဲ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သည့် ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ စကားရှိရမယ်။
၃။ အတ္တစရိယာ = တပည့်တို့၏ ကောင်းကျိုးကို ကျင့်ဆောင်ရမယ်။
၄။ သမာနတ္ထတာ = မနှိမ့်ချဘဲ ပုံမှန်တန်းတူ ဆက်ဆံရမယ်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့တွေသည် အပြော၊ အဟော၊ အရေးကောင်းတိုင်း ဆရာကောင်း မဟုတ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုးကွယ်ရာမှာ၊ ရွေးချယ်ပါ၊” ဟူသော စာဆိုလေးအတိုင်း ရဟန်သံဃာမှန်သမျှ ကြည်ညိုပါ။ တက်နိုင်သမျှလှူဒါန်းပါ။ ကြည်ညိုလှူဒါန်းသော မိမိ၏ ကောင်းမှု အကျိုးကို မလွဲမသွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဆရာအဖြစ် ကိုးကွယ်တော့မည်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ရပါမည်။
ဤသို့ဖြင့် ဆရာကောင်းတပည့်၊ ပန်းကောင်းပန်ုဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း စာဖတ်သူများသည် ဆရာကောင်း၊ ဆရာမြတ်များထံ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကာ နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 29.10.085ရေးသားခဲ့ရန်
မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ကို ပြုလုပ်ရမှာ ရှက်ခြင်းက ဟိရီဖြစ်ပြီးတော့၊ ကြောက်လန့်ခြင်းက သြတ္တပ္ပ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုတရားနှစ်ပါးမှာ မိမိဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ရှောက်တဲ့သူတို့မှာ ဟီရိတရားက ထင်ရှားပြီး ဆရာ၊ မိဘ ဆွေမျိုးစသူနှင့် အခြားသူများကို လေးစာသူတို့မှာ သြတ္တပ္ပတရား ထင်ရှားပါတယ်။ ဥပမာ.. “ငါသည် အမျိုးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ ငါ့လိုအမျိုးကောင်းသူ မကောင်းမှုပြုနေလျှင် (ဥပမာ..တံငါလုပ်ရင်၊ ကြက်တိုက်၊ ဖဲရိုက်၊ အရက်သောက်နေရင်) ရှက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်” ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ထိန်းသောအနေနဲ့ မကောင်းမှုပြုရ
မှာရှက်တာပါ။ ပညာတက်တဲ့သူကလည်း “ငါ့လိုပညာရှိ တစ်ယောက်က အောက်ကျသော မကောင်းမှုပြုလုပ်ရင် (သူ့ဥစ္စာ မတရားယူရင်) ရှက်စရာကောင်းတယ်။” အသက်ကြီးသူကလည်း “ငါလို အဘိုးကြီးက မကောင်းမှုကို ပြုရင်တော့ (လိမ်နေရင်၊ ဆဲနေရင်၊ ပေါက်တတ် ကရတွေပြောနေရင်) ရှက်စရာကောင်းတယ်” ဆိုပြီး ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ဂုဏ်တစ်ခုခုကို လေးစားသူက ဟိရိတရားကို ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်စေပါတယ်။ ငါက မကောင်းမှုပြုလိုက်ရင် ငါ့မိဘ၊ ငါ့ရွှေမျိုး၊ ငါ့ဆရာသမားတွေ ကဲ့ရဲ့ခံရမှာစိုးရိမ်လို့ ဒုစရိုက်တရားတွေလုပ်ရမှာကို ကြောက်လန့်တတ်တာက သြတ္တပ္ပတရားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မိဘ၊ ဆရာသမား တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မကြည့်ပဲ ရွဲ့ချင်တိုင်းရွဲ့၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နေသူတွေမှာတော့ ဟီရိ၊ သြတ္တပ္ပတရားနှစ်ပါးလုံး မရှိပဲ ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့သာ ပြည့်နက်နေပါမယ်။ ဟီရိနဲ့သြတ္တပ္ပ တရားနှစ်ပါးက လောကလူသားအများကို သားနှင့်အမိ၊ မောင်နှင့်နှမ စသဖြင့် ခြားနားအောင် စောင့်ရှောက်တက်သောကြောင့် “လောကပါလ=ကမ္ဘာစောင့်တရား” လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဖြူစင်သန့်ရှင်း အပြစ်ကင်းအောင် ပြုတတ်တာကြောင့် “သုက္ကဓမ္မ=ဖြူစင်သောတရား” လို့ လည်းနာမည်ရပါတယ်။ လောကမှာ ဒီတရားနှစ်ပါးမရှိရင် တိရစ္ဆာန်နဲ့ မခြားပဲ မှားချင်တိုင်း မှားပြီး မကြားဝံ့မနာသာ တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ဟီရိသြတ္တပ္ပတရားမရှိသူတွေ များလာပါပြီ။ မလုံခြုံသောအ၀တ်စားတွေ၊ ခေတ်စတိုင်ဆိုပြီး ၀တ်နေတာတွေက တော်တော်များပါတယ်။ သူတို့တွေမှာ လောကပါလ တရားဆိုတာလည်းသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မသိလို့လည်း လုပ်နေကြတာပါ။ ပြောရင်တော့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း စကားကို လက်ကိုင်ထား ကြမှာပေါ့။ ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျက်စီးပါမယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၊ လူမျိုးတခု ဆိုတာက ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့စရိုက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရတာပါ။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ဓလေ့စရိုက်တွေ ပျက်စီးလာရင်တော့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေက တစ်ဦးချင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာပါ။ ရှက်မှု၊ ကြောက်မှုကို ဟီရိသြတ္တပ္ပတရားလို့ ပြောပေမဲ့ နေရာတိုင်း၊ တွေ့ကရာ ရှက်ကြောက်မှုတွေကို ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒုစရိုက်တရားတွေ ပြုလုပ်ရမှာ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်းကိုသာ ဟီရိသြတ္တပ္ပတရား လို့မှတ်ယူရပါမယ်။ ဥပမာ.. ဥပုသ်စောင့်ရမှာ၊ တရားနာရမှာ၊ ဘုရားသွားရမှာ၊ ပရိသတ်အလယ်မှာ စာဖတ်၊ စကားပြော ရမှာကို ရှက်တာ၊ အလုပ်လက်မဲ့နဲ့ လူပေလုပ်ရမှာကို မရှက်ပဲ အောက်ကျတယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရမှာ ရှက်တာ၊ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတွေ့တဲ့ အခါမှာ ရှက်တာ တွေက ဟီရိမဟုတ်ပါဘူး။ ပရိယာယ်၊ မာယာများတာ၊ ဟန်ပန်ကြီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကီ အကျိုးစီးပွားကိုပြတဲ့ နီတိကျမ်းတွေမှာတော့…
(၁) ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အတိုးပွားပေးသောအခါ။
(၂) ဆရာ့ထံ ချဉ်းကပ်၍ အတက်ပညာသင်သောအခါ။
(၄) ဇနီးခင်ပွန်းအချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ပျော်မွေ့သောအခါ။
အဲဒီအခါတွေမှာ အရှက်တရားကို ဖယ်ထားရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ (ထိုအရှက်မရှိမှုမှာ ကုသိုလ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ မိမိအကျိုးရှိမည့် အရာမှာ မရှက်ရလို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်)။ တရားရုံးမှာ တရားသူကြီးကိုကြောက်ခြင်း၊ ရထား၊ သင်္ဘောပေါ်တွေမှာ တောသားတွေ အိမ်သာမသွားရဲပဲ ကြောက်ခြင်း၊ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ကိုကြောက်ခြင်း၊ ပြိဿာတွေကိုကြောက်ခြင်း၊ မရောက်ဖူးသောနေရာကို ခရီးသွားရမှာကိုကြောက်ခြင်း၊ ဆရာ၊ မိဘတို့ရှေ့မှာ စကားမပြောတက်အောင်ကြောက်ခြင်းတွေဟာ သြတ္တပ္ပတရားအစစ် မဟုတ်ပါဘူး။ သတ္တိညံ့ဖျင်းခြင်း (တရားသဘောအရဆိုရင်) ဒေါမနဿပြဋ္ဌာန်းသော အကုသိုလ်စုပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာရေးခဲ့သလောက်ဆိုရင် အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမှာ မရှက်သင့်၊ မကြောက်သင့်ဘူးလို့သိကြပါ။ ဒါပေမဲ့ မရှက်မကြောက်ပဲ လူမိုက်အားကိုး ရဲရမယ် မပြောပါဘူး။ လူမိုက်ကို အားကိုးတဲ့ ရဲစိတ်မျိုးဟာ တဖက်သားကို မလေးစားတဲ့ အဂါရ၀ ဒေါသ၊ မာနတရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ လူအများစုက မကြောက်ရမယ့်နေရာမှာ ကြောက်ကြတယ်။ ကြောက်ရမယ့်နေရာကျတော့ မကြောက်တက်ကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မရှက်သင့်၊ မကြောက်သင့်သော ကိစ္စမှာမရှက်၊ မကြောက်ပဲ၊ အမှန်တကယ်ရှက်ကြောက်ရမယ့် ဒုစရိုက်တရားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်သုံးပါးလုံး ညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။
ကျမ်းကိုး။ ။ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ (အရှင်ဇနကာဘိဝံသ)
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 25.10.083ရေးသားခဲ့ရန်
“သဒ္ဓါ၊ မေတ္တာရှေ့ရှုကာ ချစ်တာမြင့်မြတ်သည်။ သတိဉာဏ်ယှဉ် မုန်းတက်လျင် ၀ဋ်ခွင်လွတ်မြောက်သည်။ ဘ၀တိုင်းမှာ စောင်းမြောင်းကာ မဲ့တာကင်းပါစေ။ ဘ၀တိုင်းမှာ မူးယစ်ကာ သောက်တာကင်းပါစေ”
အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျနော်တို့ လူမှန်းသိတက်စအရွယ်ထဲက ကြားသိခဲ့ရတာပါ။ “ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး၊ ငါ့သားလေးက ချစ်စရာလေး၊ အဖိုးကလည်း အဘွားကို ချစ်တယ်ပြောမှာဘဲ..စသဖြင့်ပေါ့”။ နောက်ပိုင်းသိလာပြန်တော့လည်း “အချစ်ဆိုတာ ပကတိ အနေအထားအတိုင်းရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ
စိတ်ရဲ့အမှန်အတိုင်း ချစ်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ဘာလုပ်ပေးမှ ဘယ်လိုဖြစ်မှ ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ အတ္တကိုစေခိုင်းတာမျိုးကျတော့ အချစ်လို့မခေါ်တော့ဘူး”တဲ့။ “အချစ်ဆိုတာ ပူလောင်တဲ့ မီးတောက်ငယ်တစ်ခု မေတ္တာဟာအေးမြတဲ့ စမ်းချောင်းငယ်တစ်ခု” စတဲ့ သီချင်းစာသားလည်း ကြားဖူးပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေက အချစ်ကို အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်။ ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည်ရင် အချစ်ဆိုတာက လောဘပါပဲ။ လောကမှာ ချစ်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သားချစ်၊ သမီးချစ်၊ ဇနီးချစ်၊ ညီအကို မောင်နှမချစ် စသဖြင့်ပေါ့။ သစ္စာလေးပါးမှာ လောဘဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို သမုဒယ လို့သုံးပါတယ်။ သမုဒယဆိုတာကတော့ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခလောင်းလို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာစာအုပ်မှာ ရေးသား ထားပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ လောဘကြောင့်ပဲ သံသရာတစ်လျှောက် ဒုက္ခနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီး တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေရတာပါ။ အချစ်ကြီးရင် ဒုက္ခကြီးမယ်၊ အချစ်နည်းရင် ဒုက္ခနည်းမယ်၊ အချစ်မရှိရင်တော့ ဒုက္ခလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။ (ဒါက အချစ်ကြောင့်ဖြစ်လာရမဲ့ ဒုက္ခတွေကို ပြောတာပါ)။ ချစ်မိကြပြီဆိုရင် အချစ်နွံ့က ရုန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကို ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ “အချစ်အချစ်၊ ချစ်တိုင်းချစ်၍၊ ချစ်လေချစ်လေ၊ ချစ်မပြေတည်း။ ဆားငန်ရေနောက်၊ ငတ်တိုင်းသောက်က၊ သောက်လေသောက်လေ၊ ငတ်မပြေသို့၊ ပေမအရာ တဏှာဖွဲ့ရစ်၊ ထိုအချစ်လည်း အပြစ်မမြင် မဆင်ခြင်ပဲ၊ ချစ်လျှင်ပျော်နိုး၊ ချစ်စပျိုးသည်၊ ချစ်ရိုး ချစ်စဉ် ချစ်လမ်းတည်း” လို့ ရေးစပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သေခါနီးအချိန်တွေမှာလည်း သားသမီး၊ ဇနီးမယားအပေါ်မှာ ချစ်ခင်စွဲလန်းမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ချစ်ခင်စွဲလန်းမှုတွေကြောင့် ပြိတ္တာဘ၀ ရောက်သွားရတာတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဘုရားရှင်လက်ထက်က ရဟန်းတစ်ပါး မိမိရဲ့ သင်္ကန်းအသစ်လေး အပေါ်စွဲလန်းမိတဲ့အတွက် အဲဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာ (၇)ရက် “သန်း” ဖြစ်ခဲ့ရပါ တယ်။ ချစ်ခင်စွဲလန်းမှုတွေဟာ အပါယ်လမ်းအတွက် ၀င်ပေါက်တံခါးတစ်ခုနဲ့ တူနေသလိုပါပဲ။ ပုံသေပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ကြောင့် သီလစောင့်ထိန်းသွားတဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့ဘူးပါတယ်။ (ချစ်သူက ဘီယာမသောက်ပါနဲ့ပြောလို့ လုံးဝ မသောက် တော့တာမျိုးပါ)။ မြတ်စွာဘုရားက တရားဦး ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာ “ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော” (ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများနဲ့ ဝေးကွာရခြင်းသည် ဒုက္ခ)၊ “အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော” (မချစ်မနှစ်သက်သူများနဲ့ အတူနေရခြင်းသည် ဒုက္ခ)၊ လို့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့ ဘယ်သူမှ ကွေကွင်းမနေချင်ကြပါဘူး။ ချစ်မြတ်နိုးသူတွေနဲ့ ဘ၀သံသရာမှာ ပါရမီဖြည့်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲသွားချင်ရင်လည်း ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေး ပြောပြပါမယ်။ ယခုဘ၀မှာ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ကြသော သူနှစ်ယောက်က နောင်ဘ၀မှာလည်း အမြဲမကွဲ၊ မကွာ ဖြစ်ချင်ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ ပညာအရာတို့ တူစေရပါမယ်။ တစ်ယောက်က သဒ္ဓါကောင်းရင် ကျန်တစ်ယောက်ကလည်း သဒ္ဓါကောင်းရပါမယ်။ တစ်ယောက်က သီလစင်ကြယ်ရင် ကျန်တစ်ယောက်ကလည်း သီလစင်ကြယ်ရပါမယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကို တစ်ယောက်က မတားမြစ်ရဘူး။ မယ်ကလှူတာကို မောင်ကကြည်ဖြူတာမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် သံသရာတစ်လျှောက် စမ်းရေတွေအတူသောက် ပန်းတွေအတူကောက်ပြီး ပါရမီဖြည့်ဖက်ဘ၀ ဟန်းနီးမွန်းခရီးသည်များ ဖြစ်ချင်ရင်တော့ မြတ်ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ အချက်တွေကို ခိုင်မြဲစွာကျင့်သုံးရပါမယ်။ အမှန်ပြောရရင် သူတစ်ပါးချစ် နေဖို့ထက် မိမိကိုယ်ကို ချစ်နေဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပသေနဒီကောသလမင်းကြီးက ဘုရားရှင်အား “အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်ရာရောက်၍ အဘယ်သူသည် မိမိကိုယ်ကို မချစ်ရာရောက်ပါသနည်း” လို့မေးပါတယ်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက “အကြင်သူသည် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးတို့ဖြင့် မကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့ကို ပြုလုပ်ပြောဆိုကြံစည်နေလျင် မိမိကိုယ်ကို မချစ်ရာရောက်၏၊ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သုံးပါးလုံးဖြင့် ဒုစရိုက်တရားတို့ကိုရှောင်၍ သုစရိုက်တရား တို့ကိုပြုနေလျင် မိမိကိုယ်ကို ချစ်ရာရောက်၏”လို့ ပြန်လည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်သူ၊ သားသမီး၊ ဇနီးမယား၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများအပေါ် အချစ်လျော့ပြီး သုစရိုက် တရားများလိုက်နာကျင့်သုံးကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးသင့်ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က Tag လိုက်လို့ ဒီပို့လေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါမျိုးက လူတယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အမြင်၊ ခံစားချက်တွေက မတူကြတော့ ရေးရလို့ တော်တော်ခက်တယ်။ ကျနော့်ကို Tag လိုက်သော အစ်မနှင့်အတူ စာဖတ်သူများ ကျေနပ်နှစ် သိမ့်နိုင်ပါစေ။ အမြင်လေးတွေလည်း ရေးထားပေးခဲ့ပါ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.10.08 10 ရေးသားခဲ့ရန်
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 15.10.083ရေးသားခဲ့ရန်
မြန်မာလ ၁၂လရှိရာ သီတင်းကျွတ်လသည် ခုနှစ်ခုမြောက်လဖြစ်သည်။ ဥတုသုံးပါးရှိရာ မိုးဥတုတွင်ပါဝင်သည်။ သီတင်းကျွတ်လကို ရှေးအခါက သန်တူလဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ သံတူလ အဓိပ္ပာယ်မှာ ၀ဿာနမိုးဥတုကို “သန်”ဟူ ၍ရှေးကခေါ်ဝေါ်ကြောင်း ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီ ကျမ်း၌ဆိုသည်။ အချို့ပညာရှင်တို့က “သန်” ဟူသောပုဒ်သည် တိဗက်စသော ဘာသာတို့မှလာသော ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ “ကောက်စပါး” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ “တူ”ပုဒ်သည် အနီးစပ် ဆုံး“ထူ”ပုဒ်နှင့်တွဲယူရမည်ဟုဆိုသည်။ ထောင်သည်၊ မတ်သည် ဟုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်သည်။
ထို့ကြောင့်သန်တူလသည် ကောက်စပါးပင်များ ထောင်မတ်လာသောကာလဟု အဓိပ္ပာယ် ဟုယူဆကြသည်။ ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီကျမ်း၌ သီတင်းကျွတ်လခေါ်သည်မှာ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ မှစ၍ ၀ါတွင်းသုံးလ၊ ရက်ပေါင်း(၉၀)၊ သီတင်းသုံးရာ ကျွတ်သောကြောင့် “သီတင်းကျွတ်လ” ဟူ၍ခေါ်ဆိုသည်ဟုဆို၏။ ရှေးမြန်မာဘိုးဘွားများလက်ထက်ကတည်းက သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့တွင် ဆီမီးထွန်းခြင်း၊ ဘုရားစေတီများကို မီးပူဇော်ခြင်း၊ မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့ကို အာမိသ၀တ္ထုဖြင့် ကန်တော့ခြင်းစသော ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ မင်္ဂလာ၊ ဂါရ၀၊ နိဝါတ မင်္ဂလာ အမှုတို့ကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကြပါသည်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ် တစ်နေ့လည်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်သို့ ကြွမြန်းဆင်းသက်တော်မူသည့် နေ့ဖြစ်သဖြင့် ထူးမြတ်သောနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ဘုရားရှင် ဆင်းသက်ကြွမြန်းလာသည်ကိုရည်စူး၍ ဘုရားရှင်အား ပူဇော်သောအားဖြင့် ဆီမီးထွန်းကာ မီးထွန်းပွဲ ကျင်းပသော အစဉ်အလာသည် ရှေးဘိုးဘေများလက်ထက်ကပင် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ဘုရားရှင်သည် မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောနတ်သားကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကို ဟောကြားတော်မူပြီးနောက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် လူပြည်သို့ သက်ဆင်းတော်မူသည်ကို အကြောင်းပြုလျှက် ဤနေ့ကို “အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့”ဟု သမုတ်ကာ အဘိဓမ္မာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲများ လည်းကျင်းပကြသည်။ တစ်နည်းဆိုလျှင် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကို “ဘုရားဆုပန်နေ့” ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားရှင် တာဝတိံသာမှ ဆင်းသက်တော်မူသောအခါ လကျာင်္ဘက်ရွှေစောင်းတန်းက နတ်ဒေ၀တာများ၊ လက်ဝဲဘက် ငွေစောင်းတန်းက ဗြဟ္မာများခြံရံလိုက်ပါကာ ကိုယ်တော်တိုင် အလယ်က ပတ္တမြားစောင်းတန်းဖြင့် ဆင်းသက်တော်မူသည်။ ထိုသို့နတ်ဗြဟ္မာများခြံရံလိုက်ပါ ၍ ဆင်းသက်တော်မူလာသည့် ဘုရားရှင်၏ တုနှိုင်းဖွယ်မရှိတင့်တယ်ပြည့်စုံသော အသရေတော်ကို ဖူးမြင်ကြရသောအခါ ၃၆ ယူဇနာအတွင်းရှိသော ပရိသတ်အားလုံး ဘုရားကိုအားကျ၊ ဘုရားဖြစ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာကာ ဘုရားဆုကို တောင်းကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် “ဘုရားဆုပန်နေ့” ဟုခေါ်ဆိုထိုက်ပေသည်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့သည် ၀ါတွင်းသုံးလကုန်ဆုံး ကျွတ်လွတ်သောနေ့ဖြစ်သဖြင့် ၀ါဆိုတော်မူကြကုန်သော သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားလာ သီတင်းသုံးနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိကြပါသည်။ ထိုနေ့ အထိဝါဆိုကြသည့် သံဃာများသည် အလွန်အကျိုးထူးသော ကထိန်အလှူကို ခံယူထိုက်သော အခွင့်အရေးလည်းရရှိကြသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်.. သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့သည် ရဟန်းတော်များ ၀ါကျွတ်သောနေ့၊ အပြစ်ရှိက ပြောကြားပါရန် အချင်းချင်းဖိတ်ပန်အမှုပြုကြသော ပ၀ါရဏာနေ့၊ ဘုရားရှင်တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာ တရားတော်ကို ဟောကြားပြီးမြောက် အောင်မြင်တော်မူသော အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၊ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းခြံရံလျက် တာဝတိံသာမှ သင်္ကဿနဂိုလ်ပြည်သို့ ဆင်းသက်တော်မူသောနေ့၊ ထိုသို့ဘုရားရှင် ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို ရည်စူးပူဇော်သောအားဖြင့် ဆီးမီးစသည့် ထွန်းညှိပူဇော်သောနေ့၊ ဗြဟ္မာ၊ နတ်၊ လူ သုံးဘုံသူတို့ ဘုရားရှင်အား အတူတကွကြည်ဖြူပူဇော်သောနေ့၊ နတ်လူအများ ဘုရားဆုပန် သောနေ့စသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသအဖုံဖုံနှင့် ပြည့်စုံသော နေ့ထူးနေ့ မြတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့နေ့ထူး၊ နေ့မြတ်မှာ တရားချစ်ခင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့အား တရားတော်များနာယူ ကြည်ညိုနိုင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဘလော့မှာ ဖွင့်၍ နားကြားမရပါက တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ချ၍ နာကြားကြပါ။
သာသနာတော်နှစ်(၂၅၅၂) ခုနှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၀)ခုနှစ်၊ သတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၊
၁၄.၁၀.၂၀၀၈ (အင်္ဂါ) နေ့တွင်ကျရောက်သော “အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့” အတွက် ဓမ္မဒါနပြု ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ကိုးကားချက်။ ။ဓမ္မပိယဆရာတော်အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ (“သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ သို့မဟုတ်” စာစောင်မှ)၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 12.10.083ရေးသားခဲ့ရန်
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 12.10.089ရေးသားခဲ့ရန်
အရှင်အာစာရလင်္ကာရ ဟောကြားတော်မူသော “၀ါကျွတ်လေတိုင်း မျက်ရည်ဝိုင်း” တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 11.10.080ရေးသားခဲ့ရန်
အရှင်သုဇာတ ဟောကြားသော “မိဘမေတ္တာ သားလိမ္မာ” တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် ၁ နာရီပဲ ဟောကြားထားတာပါ။ စာဖတ်သူများ နာကြားကုသိုလ်ယူနိုင်စေရန် ဓမ္မဒါနပြုအပ်ပါတယ်။ ဘလော့မှ ဓမ္မတေးသီချင်းကို ညာဘက်အစွန်ဆုံးကော်လံ “ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ” ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ဘုရားခန်းပုံမှာ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 11.10.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
မိဘနှစ်ပါးသည် မိမိတို့၏ သားသမီးများကို ကာလလရေကြည် သန္ဓေတည်စကတည်းက စတင်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်မှာ မိမိတစ်ဘ၀အတွက် ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသည့် တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ မိဘတို့၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ စေတနာတရားသည် သားသမီးများ အတွက် အနန္တကျေးဇူးတရားများပင်ဖြစ်သည်။ သားသမီးများအပေါ် မိဘ၏ အေးမြသန့်စင်ကြည်လင်
သော မေတ္တာတရားမည်သည် လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိပေ။ ဗြဟ္မာများ၌ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတည်း ဟူသော ဘာဝနာတရားလေးပါး မကင်းမကွာ အမြဲရှိနေ သကဲ့သို့ ထိုနည်းတူ မိဘများမှာလည်း သားသမီးများအပေါ်၌ ထိုဘာဝနာတရားလေးပါး မစွန့်ခွာဘဲ အမြဲဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေခြင်းကြောင့်(တစ်နည်း) ဗြဟ္မ၀ိဟာရတရားလေးပါး အစဉ်ဖြစ်ပွား လျက်ရှိသောကြောင့် “ဗြဟ္မာတိ၊ မာတာ၊ ပီတရော” အမိအဖတို့မှာ ဗြဟ္မာများပင်ဟု ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ မိဘတို့သည်သားသမီးများကို ကလေးဘ၀၌ပင် စကားတတ်အောင်၊ ၀တ်တတ်အောင်၊ စားတက်အောင်၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်၊ ဘုရားရှိခိုးတတ်အောင်၊ ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် စကားပြောတတ်အောင် သင်ပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် မိဘတို့မှာ သားသမီးတို့၏ ပုဗ္ဗါစရိယ (လက်ဦးဆရာ)လည်းမည်သည်။ လောကတွင် ရုပ်ပမာဏအားဖြင့် အကြီးဆုံးဟု ယူဆကြသော မြေကြီး၊ စကြ၀ဠာ၊ မြင့်မိုရ်တောင်နှင့် သမုဒ္ဒရာစသည်တို့သည် မိဘတို့၏ ကျေးဇူးတရားပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော် ၀ါးရွက်၊ အပ်နဖါး၊ နွားချို၊ မိုးရေပေါက်စသည့် ပမာဏသာဖြစ်ချေတော့သည်။ သို့ဖြစ်၍ မိဘတို့၏ ကျေးဇူးဂုဏ် ကားဆပ်၍ပင် မကုန်နိုင်ပါ။
မိဘတို့၏ကျေးဇူး၊ မေတ္တာတို့ကို အဖန်ဖန်ပွားများ သတိတရားရှိနေဖို့ လိုပါသည်။ မိဘတို့ရှိစဉ် အခါတွင် မေတ္တာစိတ်၊ ကြင်နာစိတ်၊ ကရုဏာ၊ စေတနာတို့ဖြင့် ပြန်လည်ပြုစု စောင့်ရှောက်ကြရမည်။ မိမိတို့အပေါ်၌တင်ရှိသော မိဘတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးမှာ လွန်စွာများပြား သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးဂုဏ်ကြီးမားလှသော မိဘတို့ကို လုပ်ကျွေးပြုစုခြင်းဖြင့် အလွန်အကျိုးကြီး မြတ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ မိဘတို့သည် အမှန်တကယ်လုပ် ကျွေးပြုစုထိုက်သော ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤမျှကျေးဇူးဂုဏ်ကြီးမားလှသော မိဘများကို လောကီနည်းဖြင့် ဆပ်မည်ဆိုလျှင် ဘယ်နည်းနှင့်မျှဆပ်၍မကျေနိုင်ကြောင်း မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်ရာတမ်းတွင် အသက်တစ်ရာရှည်သူသည် မိဘကျေးဇူးကျေအောင်ဆပ်မည်ဟု လက်ယာပခုံးပေါ်၌ အမိကိုတင်၊ လက်ဝဲပုခုံးပေါ်၌ အဘကိုတင်လျက် ထိုအနှစ်တစ်ရာပတ်လုံး ပြုစုလုပ်ကျွေးသော်လည်း မကျေနိုင်ကြောင်း၊ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ စသော သူတော်ကောင်းတရားများ မရှိသေးသည့် မိဘတို့ကို သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံစေရန် လောကုတ္တရာ အကျိုးအတွက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်သာ ကျေးဇူးဆပ်ရာရောက်ကြောင်း မြတ်ဗုဒ္ဓက မိဘကျေးဇူးဆပ်နည်းကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဥစ္စာတွေ ဘယ်လောက်ပေါပေါ၊ ရုပ်တွေဘယ်လောက်ချောချော၊ ပညာတွေဘယ် လောက်တက်တက်၊ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀န်းတွေ ဘယ်လောက်တောင့်တောင့်၊ ရာထူးတွေ ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး… ဒါတွေအားလုံးဟာ မိဘနှစ်ပါးက ပေးခဲ့တဲ့ အမွေတွေပါ။ ထို့ကြောင့် စကား တစ်ရပ်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
~ အိမ်ကလေးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အိုမင်းယိုင်နဲ့သွား တတ်ကြပေမယ့် မိဘနှစ် ပါးရဲ့မေတ္တာကတော့ ဘယ်တော့မှ အိုမင်းမသွားကြလို့ပါပဲ။
ဤသို့ဖြင့် မိဘများအပေါ် စားရေး၊ ၀တ်ရေး၊ နေရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အတက်နိုင်ဆုံး စီမံဆောင်ရွက်ကာ ကျေးဇူးဆပ်သင့်သလို သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာ တရားလေးဖြာနှင့်လည်း ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အမေ၏ နို့နှစ်လုံးဖိုးနှင့် အဖေ၏ ချွေးဖိုးကျေအောင် ဆပ်နိုင်သည့် သားကောင်းသမီးများ ဖြစ်ကြရအောင် ကြိုးစားကြပါစို့။…..။
“မေတ္တာစိတ်မြတ်၊ အအေးဓာတ် လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာခြုံပါစေ…”
ကိုးကားချက်။ ။ “အသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့ အမေ” ( အရှင်အာစာရလင်္ကာရ )။
“သာသနာ့အခြေခံ” ( ဦးသက်စိန် )။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 4.10.083ရေးသားခဲ့ရန်
အပြု၊ အဖျက်ဤနှစ်ရပ်ကို ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပါလော့..၊
ကျွန်တော်တို့တွေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုခံယူလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိတို့သည် အမှန်တရားကိုသာ ခွန်အားသတ္တိဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံလျက် အမှန်တရားကိုသိမြင်ရေး အတွက် တက်စွမ်းသမျှကြိုးပမ်းအားထုတ်မည်ဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တရား (သစ္စာတရား)များ၊ ထိုတရားများကို ဖော်ထုတ်ဟောကြားသွားသော မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဟောကြားသော သံဃာတော်များသည်သာ ကိုးကွယ်ရာ အစစ်ဖြစ်သည်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလက်ခံကြပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ
ကလွဲပြီး အခြားသော အယူများကို အားထားနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ လူတွေက လတ်တလော အဆင်ပြေမှုကို လိုလားသောကြောင့် အခြားအယူအဆများလုပ်ဆောင်နေ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ထိုသူမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်၏ အခြေခံဖြစ်သော ကမ္မဿကတသမာဒိဋ္ဌိ ကိုပင်မရှိတာ ဖြစ်သွားပါမည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တရားတွေကို မိမိတို့လုပ် ဆောင်ချက်နှင့်ပင် မိမိ၏တန်ဖိုးကို ဖြတ်ရာရောက်ပါသည်။ လူတွေ၏ ယုံကြည်မှုတွေမှာ အတုယောင်တွေ လွမ်းမိုးမှုကြောင့် အမှားများစွာဖြစ်ကြရသည်။ အားလုံးကိုအသေးစိတ်ပြောရရင် ပြောလို့မဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝင်းသိန်းဦး ရေးသားသော “ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓမဝေဖန်” စာအုပ်မှ ကျွန်တော်ဖတ်ရှုသိသော အသိအနည်းငယ်ကိုသာ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ယခုတွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှည်စူး၍ တည်ထားကိုးကွယ်သော စေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်တွင် ဘိုးတော်၊ ဘတော်၊ မယ်တော်၊ အစ်မတော် အမည်ခံ ၀ိဇ္ဇာဓိုလ်နှင့် နတ်များက ဘုရား နှင့်စင်ပြိုင် အကိုးကွယ်ခံနေကြသည်မှာ အမြင်မတော်မလှပါဘူး။ သူတို့အားကိုးကွယ်သူအချို့ ကပြောကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် ယခုဘ၀မှာပင် ၀ိပဿနာလမ်းကိုလိုက်၍ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပါက မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ကို လျင်မြန်စွာရပြီး နိဗ္ဗာန်အားမျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် အ၀ိဇ္ဇာလွှမ်း၍ မသိနားမလည် မိုက်မဲကြကုန်သော သတ္တ၀ါအပေါင်းကို သနားသက်ညှာလှသဖြင့် ထိုက်သင့်သူတို့အား ကယ်တင်စောင်မရင်း သာသနာပြုနေကြသူများဖြစ်သည်။ သတ္တ၀ါတို့အပေါ် မိဘ၊ ဆရာသမားသဖွယ် စောင့်မကြည့်ရှုနေသူများဖြစ်၍ အနန္တောအနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူုတို့အား ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ထိုက်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ (ဤနေတွင်သတိပြုရန်မှာ ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့် အနန္တော အနန္တငါးပါးတို့၏ ကွဲပြာခြားနားမှု ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အနေနှင့် ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ထိုက်သည်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည်းဟူသော ရတနာမြတ်သုံးပါးသာ လျှင်ဖြစ်သည်။ နောက်လူတို့က မိဘနှင့်ဆရာပေါင်းထည့်ကာ အနန္တောအနန္တငါးပါးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သော်လည်း ရတနာသုံးပါးနှင့်တန်းတူထား ကိုးကွယ်ရန်မဟုတ်ပေ)။
မိဘနှင့်ဆရာသမားတို့အား ကျေးဇူးရှင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် သားသမီးကျင့်ဝတ်၊ တပည့်ကျင့်ဝတ်တို့နှင့်အညီ အရိုအသေပေး၊ အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တန်းတူထား၍ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ဆည်းကပ်ရန်ကား မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ပြောသလို သတ္တ၀ါများအပေါ် အမှန်တကယ်ကယ် တင်စောင့်ရှောက်နေသည်ပဲ ထားဦးတော့၊ စစ်မှန်သော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးအနေဖြင့်ကား ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့် တန်းတူထား၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် မလိုကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။
တရံရောအခါက ဗာရာဏသီပြည်တွင် ၀ိဇ္ဇာဓိုလ်တစ်ဦးသည် ညဉ့်သန်းခေါင်ယံအချိန်၌ မိဖုရားကြီးအဆောင်တော်သို့ တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ကာ ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စကို မင်းကြီးသိရှိသွားသဖြင့် ၄င်းအားလိုက်လံဖမ်းဆီးစေခဲ့ရာ ၀ိဇ္ဇာဓိုလ်သည် ရဟန်းအသွင်ဆောင်၍ သုသာန်အတွင်း၌ ညာခြေတစ်ဖက်တည်းနှင့်ရပ်ကာ မန္တာန်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင်း နေကိုရှိခိုးဟန်ပြုနေလေသည်။ ထိုရဟန်းတုအား မင်းချင်းများက လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ၀ိဇ္ဇာဓိုလ် တန်ခိုးဖြင့် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရဟန်းစစ်နှင့် ရဟန်းတုမခွဲခြားတက်သော ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် ရဟန်းမှန်သမျှ မင်းပြစ်မင်းဒဏ်သင့်စေသဖြင့် ရဟန်စစ်များပါ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရရာ ကိုးကွယ်ရာမဲ့ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရဖူးသည်။ (၀ိဇ္ဇာဓရဇာတ်၊ ဆက္က နိပါတ်၊ ဇာတက၀တ္ထု။)
ဤသည်ကား ၀ိဇ္ဇာဓိုလ်ဆိုတိုင်း ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လိုသူများအတွက် သတိပြုစရာ သာဓက တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း ၀ိဇ္ဇာဓိုလ်ဆိုသူများသည် သတ္တ၀ါအပေါင်းကို ကယ်တင်ရင်း နောင်ပွင့်မည့် အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ကာလရှည်ကြာစွာ စောင့်ဆိုင်းနိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏ သက်တမ်းကိုရှည်သည်ထက် ရှည်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ် နေကြသည်ဟုလည်း ဆိုကြပြန်သည်။ ဤသည်မှာလည်း ပညာဉာဏ်ရှိသူတို့ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိသော ဆင်ခြေတစ်ရပ်သာဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အလိုအရမူ မတည်မြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အစိုးမရသော ဤလောကမှ တစ်စက္ကန့်စော၍ လွတ်မြောက်နိုင်လျှင်ပင် တစ်စက္ကန့်စော၍ ချမ်းသာသုခရပြီဟု မှတ်ယူရမည်သာဖြစ်သည်။ မိမိတို့မျက်မှောက်၌ပင် ဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ရာ တရားစစ်တရားမှန်တို့ ရှင်သန်ထွန်းကားနေပါလျက် မလိုက်နာမကျင့်ကြံသေးဘဲ နောက်ဘုရားအပွင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းမည်ဆိုခြင်းမှာ ဉာဏ်ပညာနည်းသောလုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကို သာသာသနာပြုနေကြသည်ဟု ပြောနေကြသူများသည်လည်း လူ“အ” များပင်ဖြစ်ပေမည်။
ဆရာတော်အရှင်သုမင်္ဂလက တရားထဲတွင် ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်ခေါင်တို့ အပါယ်ရောက်ကြောင်း ဟောကြားတဲ့အခါ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တပည့်က သူတို့ဆရာတွေဟာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိပွား နေတာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အပါယ်ရောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်မလားဟု လျောက်ကြားသည်။ ထိုအချိန်မှာ ဆရာတော်က သူတို့ ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို နှလုံးသွင်းပြီးသေတယ်လို့ အာမခံမလားမေးပါတယ်။ သူတို့ယူဆထားတဲ့အယူကိုက မမြဲတဲ့သဘော(အနိစ္စ)ကို မြဲတယ်(နိစ္စ) လို့ယူဆထားတဲ့အတွက် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြောင်း၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့၏ သွားရာသည် အပါယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် ကိုးကွယ်အားထားရာ မဟုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်တွင် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အားထားမှုမလုပ်သင့်ပါ။ မိမိတို့ကို လွမ်းမိုးနေသော အ၀ိဇ္ဇာ အမိုက်မှောင်ကို ဉာဏ်အလင်းဖြင့်ခွင်း၍ သာသနာကို စောင့်ရှောက်သင့်ပါသည်။ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့သည်လည်း အားလုံး၏ အကျင့်ပေါ်မှာ မူတည်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့သော တရားများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးနေကြသ၍ သာသနာသည်လည်း တည်တံ့နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာဆိုင်ရာ သာသနိကအဆောက်အအုံတချို့တွင် ၀င်ရောက်နေရာယူလာကြသည့် ဘိုးတော်၊ ဘတော်၊ မယ်တော် များကိုဤအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေပါက မသင့်တော်ပါ။ လူတိုင်းကိုသိစေချင်ပါသည်။ အသိတရားကိုလည်း ကျင့်စေချင်ပါသည်။
“စာဖတ်သူများ အသိအမြင်တိုးပွားကာ သာသနာအကျိုး၊ မိမိအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ”
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 28.9.08 11 ရေးသားခဲ့ရန်